Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Romelu Lukaku Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Romelu Lukaku Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Worth.
Na nkenke, anyị na -egosi akụkọ ndụ nke onye egwuregwu bọọlụ Belgium nke meere onwe ya aha - maka klọb na obodo.
Ụdị Lifebogger nke Akụkọ zuru oke nke Lukaku na -amalite site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama n'egwuregwu ahụ.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịbendị gị dabere na ụdị nke Romelu Lukaku's Bio, anyị agala n'ihu igosipụta ndụ nwata ya na ịrị elu ụlọ ngosi ihe ngosi.
Ee! ị ga -ekwenye na foto a na -achịkọta akụkọ ndụ ya.
Ihe omuma nke Romelu Lukaku. Lelee ndụ nwata ya na Nnukwu akụkọ banyere ihe ịga nke ọma.
A nnukwu na ihe siri ike mgbaru ọsọ scorer, Lukaku a maara iji ya anụ ahụ na-gburugburu na-agbachitere. Daalụ ya, Inter weghaara nrọ Cristiano Ronaldo nke Serie A.
N'agbanyeghị ekele ndị aha ya nwere, ndị otu anyị chọpụtara - na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ otu akwụkwọ dị mkpirikpi Romelu Lukaku Life Story. Anyị ewepụtala oge iji kwadebe isiokwu a, n'ihi ịhụnanya anyị nwere maka onye na-eti ihe. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Romelu Lukaku Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị mbido Biography, ọ na -ebu aha otutu - Rocky na tank. Aha ya zuru oke bụ Romelu Menama Lukaku Bolingoli.
A mụrụ onye ọkpụkpọ Belgium na 13th ụbọchị nke May 1993 nne ya, Adolphine Bolingoli Lukaku na nna, Roger Lukaku, n'obodo Antwerp, Belgium.
Romelu Lukaku bịara n'ụwa dị ka nwa mbụ n'ime ụmụaka abụọ (ya onwe ya na Jọdan) amụrụ na njikọ alụmdi na nwunye dị n'etiti nne na nna ya nke esere n'okpuru.
Site n'ihe anyị na -ahụ, o were mgbe ọchị nne ya na ihu ihu papa ya.
Zute nne na nna Romelu Lukaku - nne ya, Adolphine Bolingoli na nna, Roger Lukaku.
Romelu Lukaku nọrọ otu nwata na nwanne ya nwoke. Ọ na -aga n'aha - Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge.
Foto dị n'okpuru, ị ga -achọpụta na ha fọrọ nke nta ka ha dị elu. A na -ekewa afọ abụọ ha naanị otu afọ. Ụbọchị ọmụmụ Romelu bụ 13th nke May, 1993 mgbe Jordan bụ 25th nke July, 1994.
Zute Romelu na Jọdan n'oge ha bụ nwata.
Romelu na Jọdan anọghị nso, ha na -ejikọkwa ọnụ nke ukwuu kemgbe ha bụ nwata.
Ụmụ nwoke ga na -egwuri egwu ọnụ oge niile, nke kachasị mkpa, anaghị ekwe ka ibe ha na -awagharị n'ọchịchịrị naanị. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ha abụọ ka bụ oghere nke ha ji ahụ nwata ha.
Maka onye Belgium na -eti ihe, nwata agaghị ezu oke na -enweghị mmadụ abụọ ọzọ. Nke mbụ bụ nwa nwanne nna ya, Boli Bolingoli-Mbombo.
Nke abụọ na ndepụta ahụ abụghị Vinnie Frans, onye ọ na -ewere dị ka ezigbo enyi na onye agbata obi nwata ya.
Vinnie karịrị enyi mana nwanne ọzọ. Ọ nọwo nso Lukaku (ruo taa) ọbụna tupu ama ama ya.
I huru ezigbo enyi abuo a (Romelu na Vinnie)? Ha abiala otutu uzo na ndu.
Nwata… Ahh! Ezi ụbọchị ochie mgbe Vinnie, Lukaku, Jordan na Boli na -egwuri egwu na nnukwu ite mmiri ga -eweta mmetụta Nostalgic kacha mma.
Ọ dị mkpa ịmara na - n'oge ahụ - homonụ uto nke Romelu amalitela ime ka ahụ ya yie okenye karịa afọ ndụ ya.
Ezigbo ezinụlọ Romelu Lukaku:
Na agbata obi ebe o toro, a na-ahụta ezinụlọ ya ka ọ bụrụ klaasị obere ego. N'okwu dị mfe, nne na nna Romelu Lukaku dara ogbenye ma mebie.
Nna ya - onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ - nwetara obere ego mgbe ọ na -egwuri egwu maka otu egwuregwu kacha ala na Belgium. N'aka nke ọzọ, nne ya bụ naanị nwanyị na-arụ ọrụ oge niile.
Eziokwu dị mwute nke Roger Lukaku - ezumike nka na ịda ogbenye:
Egwuregwu maka obere ndị otu - ụdị nke FC Boom na klọb ndị Belgium ndị ọzọ dị ala mere ka papa Romelu Lukaku nweta obere ego.
N'ụzọ dị mwute, Roger enweghị ike ịchekwa ego zuru oke maka ụbọchị mmiri ozuzo - na nkwadebe maka mgbe ọ ga -akwụdo akpụkpọ ụkwụ ya. N'ụzọ tụrụ ya n'anya, ọrụ bọọlụ ya kwụsịrị na mberede n'afọ 1999.
N'oge ezumike nka ike ya, Roger enweghị obere ego ọ ga -eji lekọta ezinụlọ ya. Iji mee ka ihe ka njọ, ọ gara n'ihu itinye ego na -adịghị mma - otu enyi ezinụlọ ya gwara DailyMail.
Ịtinye ego ya na azụmaahịa na -ezighi ezi mefuru obere nzọpụta ọ chịkọtara. N'ihi ya, ọ fọrọ nke nta ka ezinụlọ ya enweghị ihe ha ga -eri.
Romelu Lukaku Nsogbu Ezinụlọ:
N'ịkọwa nzụlite ịda ogbenye nwata ya, Lukaku kwuru na nne ya ga -agbazinye achịcha ruo mgbe ọ nweghị ike ịkwụ ụgwọ ya - site na ebe a na -eme bred dị nso.
N'ikwu nke a, Lukaku kpughere na ezinụlọ ya biri ndụ ruo ọtụtụ izu na -enweghị ọkụ eletrik yana otu enweghị mmiri ọkụ ịsacha mgbe ọ lọtara ọzụzụ.
Eziokwu bụ, Romelu enweghị nri ụtụtụ n'oge ahụ. Nwa nwoke dara ogbenye riri nri - ọkachasị achịcha na mmiri ara ehi mgbe ọ si ụlọ akwụkwọ lọta.
Mgbe ọ na -akọwa ọkwa ịda ogbenye ezinaụlọ ya chere ihu, Romelu Lukaku N'ajụjụ ọnụ gwara ndị nta akụkọ - n'okwu mmetụta ndị a:
M na-echeta kpọmkwem oge m maara na ezinụlọ m abụghị nanị ogbenye, ma mebiri. Ọtụtụ mgbe, m ka na-ahụ mama m ka ọ kwụ n’akụkụ friji na otú ihu ya dị.
Adị m afọ isii n'ụbọchị ahụ, m bịara n'ụlọ maka nri ehihie n'oge ezumike m n'ụlọ akwụkwọ.
Ka m na-abanye na kichin, ahụrụ m mama m na igbe nke mmiri ara ehi, dị ka nke nkịtị.
Ma na nke ugbu a, ọ na-etinye ihe n’ime ya. Mama m na-agwakọta mmiri na mmiri ara ehi. Anyị enweghị ego zuru ezu iji mee ka ọ gafee izu niile.
N'olu na -egbu mgbu, Adolphine gwara nwa ya nwoke (Romelu) ka ọ bịa drinkụọ mmiri ara ehi a gwara agwa. O wetakwara achịcha (ịgbakwunye) nke ọ gbazitere n'ụlọ bred dị nso.
Romelu dị umeala n'obi, dịka ọ dị, anaghị eme mkpesa mgbe ọ ghọtara ọnọdụ ahụ. Ya na nwanne ya nwoke (Jọdan) ga -aga na -a milkụ mmiri ara ehi a gwara agwa wee rie achịcha kwa ụbọchị.
Alizingghọta mkpa ọ dị ịchekwa Ọnọdụ Ezinụlọ ya:
Site n'ụbọchị ahụ, Romelu ghọtara na ezinụlọ ya agbajikwa n'ezie na nnukwu nsogbu. Karịa nke ahụ, na emechara ha - nke pụtara na ihe isi ike akala ha mma.
N'ime oge ndị ahụ, ọ na -agwa onwe ya mgbe niile - na ọ kwesịrị ime ihe/too ngwa ngwa - n'echiche nke ịchekwa ezinụlọ ya.
Antonio Valencia Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Na-eri nri, ezinụlọ Romelu Lukaku (dị ka Neymar ahụmahụ - n'oge ọ bụ nwata) enweghikwa ọkụ eletrik. Site na ntinye, ọ pụtara na enweghị ọkụ na ụlọ ya.
Iji mepụta okpomọkụ, nne ya ga -eji gas esi ite mmiri ọkụ. Mgbe mmiri dị njikere, Romelu na Jọdan ga -eji iko were butere ma fesaa ya n'isi - n'aha ọkụ.
Anyị nwere ebe a, vidiyo na-agbawa obi ebe o kwuru banyere ezinụlọ dara ogbenye. Dika ozo, ihe ndi o gabigara dika nwatakiri.
Ndi agbata obi we chigharia ma obu nani otu onye nyere aka:
Ị maara?… Nne Vinnie Frans (ezigbo enyi Lukaku kemgbe ọ bụ nwata) bụ naanị onye agbata obi nwere ọmịiko n'ebe ezinụlọ ya nọ ma dị njikere inye aka.
Oriakụ Frans nwere ike ịkọ na ndị Lukaku na -alụ ọgụ n'ezie na ịda ogbenye na Adolphine (mama Romelu na enyi ya) chọrọ enyemaka.
N'ụzọ dị mwute, ndị agbata obi ndị ọzọ jụrụ inye aka na ego ma ọ bụ ụdị. Ndị a bụ ndị chere na nsogbu ndị ezinụlọ Lukaku nwetara abụghị nke ha - nke pụtara na ọ bụghị ha kpatara ya.
Ebe ọ nweghị onye na -enyere ha aka, mama Vinnie Frans nọgidere na -enyere aka. O mere ike ya niile, mana ọ dị nwute na ezughi oke ka ezinaụlọ ahụ chọkwuru enyemaka.
N'ikpeazụ, nwee olileanya maka Lukaku:
Obi dị m ụtọ na ebe mbụ Roger na -arụ ọrụ chetara ya. Ọ dabara na papa Romelu Lukaku, FC Boom (klọb ọ lara ezumike nká) nyere ya obere ọrụ - dị ka onye na -enye ọzụzụ.
Ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ụgwọ ụlọ ya ma nyekwa ya obere ụgbọ ala. Ebe ọ bụ na ọ na -akpata obere ego, otú ezinụlọ ya si ebi ndụ ka mma. E nwere mmiri ara ehi na ọkụ eletrik nkịtị maka ụlọ.
Ị maara?… FC Boom nyeere Roger Lukaku aka ịkwụ ụgwọ ezinụlọ ya gụnyere ịkwado ya ụgbọ ala ochie. Chọta n'okpuru, ezigbo ụlọ Romelu na ezinụlọ ya biri - n'oge ahụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ezinụlọ ya - n'oge a - agbajighị ọzọ mana ọ dara ogbenye. Nke a bụ n'ihi na ọrụ nkuzi nna ya ka na -akwụ obere ụgwọ.
Nke a bụ ụlọ ebe ezinụlọ Romelu Lukaku bi - n'oge ọ bụ nwata.
Site na obere ego na -abata, Roger Lukaku (nwere obi ọma) bịara nwee mmesapụ aka n'iziga ego iji kwado ezinụlọ ya agụụ na -agụ na Congo, Africa.
Ugbu a, ka anyị jiri akụkụ na -esote Akụkọ ndụ anyị, kọọrọ gị gbasara mgbọrọgwụ onye Belgium.
Ezigbo ezinụlọ ezinụlọ Romelu Lukaku:
Roger - onye isi ụlọ - malitere ndụ dị ka onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara maka Zaire, nke a maara ugbu a dị ka Democratic Republic of Congo.
Na mgba iji nwee ihe ịga nke ọma, ọ kwagara Côte d'Ivoire ebe ọ gbara bọọlụ tupu ọ laghachite Congo.
N'oge nlọghachi Roger, steeti Central Africa (Congo) nọ n'ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'afọ ahụ (1990), Mobutu Sese Seko, onye bụbu onye ọchịchị aka ike nke Zaire (nke bụ Congo ugbu a) manyere mba ahụ ịmalite usoro mgbanwe mgbanwe akụ na ụba na -egbu mgbu.
Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, onye ọchịchị aka ike mere ka Congo banye n'ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị-nke agha obodo zuru oke sochiri na 1992.
Agha obodo Congo manyere Roger na Aldophine ka ha gbaga Congo - maka ụjọ maka ndụ ha na ịchọ ibi ndụ ka mma na mba ọzọ.
Site n'enyemaka nwanne nna ya, Roger gara biri na Belgium - n'ihi na Congo (obodo ya) bụbu ógbè ndị Belgium.
Karịsịa, n'oge ọchịchị, ọtụtụ ndị Congo kwagara Belgium ịchọ ndụ ka mma.
Map a na-akọwa Romelu Lukaku Ezigbo ezinụlọ na mbugharị na Belgium.
Otu obodo Kongo esenidụt pụta na Belgium, na nna Lukaku họọrọ ibi na mba ahụ.
Mgbe ezinụlọ ahụ rutere mba ahụ, ha gbagara Antwerp. N'obodo ahụ, Roger mere ndụ ya site na igwu egwu na otu ọgbakọ Belgium.
Ọzọkwa iji mara, Adolphine adịlarị ime na Romelu mgbe ezinụlọ ya na-anwa ịkwado Belgium. Ọ mụrụ ya na 1993 ka Jọdan (nwa ya nke abụọ) bịara n'afọ na - esote - 1994.
Romelu Lukaku Mmụta:
Mgbe oge ruru (afọ isii), ya na ezigbo enyi ya (Vinnie) malitere ịga akwụkwọ mmanye.
Ọchịchọ agụmakwụkwọ mere Lukaku ka ya na ụmụaka si n'ụdị nzụlite niile dị n'otu. Nnyocha nwere ya na ọ bụghị nwata kacha mara mma n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na o nweghị uche.
N'ezie, Romelu nwere obi ụtọ karịa ịgba bọọlụ na agbata obi ya n'akụkụ Jọdan na Vinnie karịa ime ihe omume ụlọ ya.
Ọ ga -amasị gị ịmara na foto dị n'okpuru ebe a bụ egwuregwu bọọlụ ebe Romelu buru ụzọ gbaa bọọlụ ya. Dị ka a hụrụ, ọ dị n'akụkụ ụlọ ezinụlọ ya.
Nke a bụ egwuregwu bọọlụ ebe ọ malitere maka Romelu.
Dị ka Marcus Rashford, onye Belgium na -eto eto so na usoro nri ụlọ akwụkwọ ya. Nwatakịrị ahụ yiri nnukwu (nke na-apụta mgbe niile karịa ndị ọgbọ ya) ka ya na ezigbo enyi ya, Vinnie, na ụmụ akwụkwọ ibe ya sere. Ha niile dị njikere iri nri ụlọ akwụkwọ ha.
Romelu Lukaku na Vinnie sere onyinyo itinye aka na mmemme nri ụlọ akwụkwọ ha. Bọchị ahụ bụkwa ụbọchị ọmụmụ nke nwa klas ya.
Lukaku tara ahụhụ Racism na School:
N'ịbụ onye a kọwara dị ka nwata dị umeala n'obi, Lukaku enwetaghị onwe ya na ụmụaka ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe nwute, n'ihi na ọ bụ onye isi ojii ma buru nnukwu ibu karịa ndị enyi ya nke otu ọgbọ, Romelu dara ogbenye na -akparị echiche ọjọọ.
Naanị otu onye maara oke ịkpa oke agbụrụ ọ tara n'ụlọ akwụkwọ. Dị ka ezigbo enyi ya, Vinnie si kwuo, Romelu Lukaku na -ata ụta mgbe niile maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgụ niile.
N'ajụjụ ọnụ ya na Daily Mail-Online, o nyere akụkọ akụkọ ụlọ akwụkwọ Lukaku-n'okwu ya;
Onye Belgium bụ Romelu Lukaku gbalịsiri ike ịkpa ókè agbụrụ n'ụlọ akwụkwọ. A mara ya ikpe mgbe niile dị ka onye ikpe mara n'ihi na ọ bụ 'nnukwu nwa ojii' ahụ.
N'ezie, ọ bụ nwata nwoke kacha nwee omume ọma m maara, onye na-agaghị emerụ ahụ ijiji. Ọ bụ mgbe niile ka ndị ọzọ bidoro ya, na-abụkarị mkparị agbụrụ.
Romelu Lukaku Akụkọ Untold Biography - Nwee nkụda mmụọ na nna ya:
Romelu Lukaku nọrọ oge dị mkpa n'oge ya na Chelsea na-alụ ọgụ ịhapụ nna ya Roger n'ụlọ mkpọrọ ndị Belgium mgbe a mara ya ikpe na ọnwa 15 n'ụlọ mkpọrọ maka ịwakpo nwanyị ma debe ya n'ụgbọ ala ya.
Ikpe ahụ juru ya anya mgbe ọ kwụsịrị ịga ikpe ahụ. O kwuru na n'agbanyeghị na nwanyị bụbu onye hụrụ nna n'anya n'eziokwu, ọ ga-abụrịrị na ọ mepụtara akụkụ ka ukwuu nke akụkọ ya.
Lukaku Snr kwesịrị ịga ikpe ya, mana agbaghara ya n'okpuru nkwupụta nke agwaghị ya.
Romelu Lukaku nwere ndakpọ olileanya na nna ya mgbe ndị ọchịchị Belgium chọpụtara na ọ kwagara n'akụkụ ọzọ nke Brussels ịdebanye aha adreesị ọhụrụ na nke ọzọ iji gbanahụ ikpe ya. Nke a butere mkpagbu ngwa ngwa na ịtụ mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ ruo ọnwa 15.
'A mara onye ahịa m ikpe n'ihi na ọ bịaghị n'ụlọ ikpe,' onye ọka iwu ya kwuru. 'Ọ bụghị n'ụlọ mkpọrọ. Nwunye ya na-ata ahụhụ, mana ụmụ ya nwoke, Romelu na Jọdan, na-eme ihe niile iji mee ka nna ha pụọ ​​ozugbo.
'Maazị Roger Lukaku mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ na-ajụ ikpe ahụ. Emere nke a na nke ọzọ ka ekpegharịa ikpe ahụ ọzọ. Otú ọ dị, mgbalị niile emezughị. A tọhapụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọnwa 15 rụsịrị ọrụ ike.
Oge mkpọrọ ya bụ oge siri ike nye ya n'ihi na nke a nwere mmetụta dị njọ na ahụike ya dị ka a hụrụ n'elu. O kwesiri inwe oke ntaramahuhu maka mmejọ a na-agbakwunye nke izere ụlọ ikpe site na ịkwaga.
Romelu Lukaku kwụsịrị ihe a ime dịka o nwetara ọkaiwu kacha mma maka nna ya. Ịgba ọsọ iji mee ka nna ya nwee nchekwa na ntọhapụ metụtara ọrụ ịgba bọọlụ ya na arụmọrụ adịghị ala na Chelsea.
Nke a, na mgbakwunye n'okwu nna ekwesịghị ntụkwasị obi nke nna ya, bụ ihe kpatara na ha abụghị ezigbo ndị enyi.
Romelu Lukaku Ndụ Ndụ:
N'ebe a na -ede ihe, onye toro ogologo na anụ ahụ siri ike alụọla di ma ọ lụbeghị. Ọ nwere ọmarịcha enyi nwanyị aha ya bụ Julia Vandenweghe.
Ha abụọ nwere ịhụnanya miri emi n'ebe ibe ha nọ.
Julia Vandenweghe na Romelu Lukaku ejighị ihere na-egosi na ha hụrụ ibe ha n'anya n'anya.
Ọ na-asọpụrụ ya n'ebe ọ bụla ọ kpọgara ya. Ha na onye na-akpa kemgbe afọ ole na ole ugbu a, onye ọ bụla ma banyere ya kwenyere na ọ ga-abụ di na nwunye.
Julia nwere ezigbo ntụsara nke Romelu, enyi ya nwoke. A pụrụ ịkọwa nkasi obi ya na ya n'ime ihe 6 kpatara ya,
Nke mbụ bụ Gene ya. Romelu bụ onye nwere ike ịlụ ma nwee ike mụọ ụmụ ga -ekwe omume. Nke abuo bu nchekwa. O nwere mọzụlụ na -eme ka obi ruo ya ala.
Julia maara na Romelu nwere ike ichebe ya, n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Nke atọ, Romelu bụ ezigbo onye na -enye ihe. Ọ na -elekọta ya ma na -egbo mkpa ya niile.
Nke anọ, Romelu bụ enyi nwoke trophy nwere ezigbo uwe. Maka Julia, inwe ezigbo enyi nwoke na -enye ya ohere.
Ewezuga ịbụ onye mara mma ma dị mma, Romelu bara ọgaranya ma nwee mmekọrịta ọha na eze. N'ezie, olee ihe ọzọ ọ ga-achọ n'aka ya?.
Ha abụọ na-eji oge kachasị mma ha na-egwu egwu n'èzí. Obi abụọ adịghị ya, Julia bụ nwa agbọghọ mara mma, nke kachasị ịtụnanya na ihu na-enweghị ntụpọ.
Ọ rụrụ ọrụ dị ka oge ntụrụndụ, Njem & Ọkachamara Ọkachamara na Belgium, tupu nke ahụ arụ ọrụ na ndị ahịa na Costa Crociere.
Romelu Lukaku gbara arụkwaghịm wee mee ya onye ọchụnta ego n'ahịrị ọrụ ya.
Romelu Lukaku Akụkọ nwata - Ka o si dị ka ọ dị afọ 10:
Onye ọ bụla ga-asị na ha nwere ihu ọma na ha agbapụghị ya
Ọ bụrụ na gị na onye ọgbọ gị gbara bọọlụ mgbe ị bụ nwata, mgbe ahụ ị ga -echeta ọ joyụ dị n'inwe onye otu ọgbọ mana ọ dị ka nnukwu na ihe na -emenye ụjọ. Nke a bụ ihe Lukaku dị ka mgbe ọ dị afọ 10.
Ọ bụ onye onye ọ bụla na -atụ egwu n'ihi na ọ bụ nwa nwoke kachasị ukwuu n'ọhịa egwuregwu. Romelu pụtara dị ka onye ga -anọ na ebe mgbaru ọsọ wee na -amaja onye mwakpo ọ bụla na -abịa ịka akara.
Ọ ka nwere ọnụnọ anụ ahụ mara mma nke ukwuu, oge a n'akụkụ nke ọzọ nke pitch (ọgụ).
Romelu Lukaku Football Akụkọ:
Lukaku sonyere Rupel Boom nke dị na ya mgbe ọ dị afọ ise. Mgbe oge anọ dị na Rupel Boom, Lukmas chọtara ndị na-egwu Lierse SK, onye otu Belgian Pro League na ụlọ ọrụ ntorobịa guzobere.
Ọ gụrụ Lierse site na 2004 ruo 2006, na -ebute ihe mgbaru ọsọ 121 n'ime egwuregwu 68. Mgbe Lierse kwụsịrị na Belgian Pro League, Anderlecht zụtara ihe na-erughị ndị ntorobịa 13 sitere na Lierse na etiti 2006, otu n'ime ha bụ Lukaku.
Ọ gbara afọ atọ ọzọ dị ka onye na -eto eto Anderlecht, na -ebute ihe mgbaru ọsọ 131 n'ime egwuregwu 93.
Lukaku mere ọkachamara ọkachamara ya mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ọ dị afọ iri na isii, wee bụrụ onye kachasị na 16-2009 na Belgium ka Anderlecht meriri n'ọgụ ndị Belgian. Ọ nwetakwara Belgian Ebony Shoe na 10.
Na windo mbufe oge 2011, Lukaku sonyeere ọgbakọ Premier League, Chelsea. Ọ pụtaghị mgbe niile n'oge mbụ ya n'ebe ahụ, wee jiri oge abụọ a na-esote na mbinye ego na West Bromwich Albion na Everton n'otu n'otu, na-edebanye aha na-adịgide adịgide maka nke ikpeazụ maka klọb-ndekọ 28 nde na 2014.
Lukaku mere izizi mbụ nke mba Belgium na 2010 wee ritela ihe karịrị 50. Ọ nọchitekwala mba ahụ na 2014 FIFA World Cup na UEFA Euro 2016.
Romelu Lukaku Biography - Na -emeri Ebony Shoe Award:
The Ebony akpụkpọ ụkwụ Nrite bu onyinye mmeri nke mba Beljiọm kwa afọ nye onye kachasị mma n’Africa ma ọ bụ nke Africa Belgian Pro Njikọ.
Ndị juri mejupụtara ndị nkuzi klọb klọb, ndị Mba Belgium onye njikwa, ndị nta akụkọ egwuregwu, na ndị ọka iwu (s) na-asọpụrụ.
Banyere 2014, Mbark Boussoufa (3 mmeri), Daniel Amokachi (2 na-enweta mmeri) na Vincent Kompany (2 na-enweta mmeri) bụ naanị egwuregwu iji merie ihe karịrị otu ugboro.
Romelu Lukaku Biography - Otu o siri hụ Chelsea bọọlụ n'anya:
Nke a dị ka Lukaku si kwuo;
"Anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ, anyị nwere ezumike ụbọchị atọ na London ịga leta ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie. Amaghị m na anyị na -eleta àkwà mmiri nke mere na ọ wụrụ m akpata oyi n'ahụ.
Adị m afọ 16, mụ na Anderlecht na -egwuri egwu. Ọ bụ nrọ mezuru ileta ebe dike m (Didier Drogba) na -egwu.
Site n'ụbọchị ahụ, akwụsịghị m nrọ nke igwu egwu Chelsea FC. Arọ m na-egwu ebe a kemgbe m bụ 10 afọ, na-eche echiche banyere ịkwanye aka na ndị egwuregwu niile dịka John Terry na Frank Lampard na dike m, Didier Drogba. ọ dị ịtụnanya ịhụ nrọ m na-abịa n'eziokwu.
Ịga ụlọ akwụkwọ ochie ya:
Romelu Lukaku nwere Baccalaureate (BSc) ugbu a na mmekọrịta ọhaneze. Dị ka ya si kwuo “Ịga ma na -eme nke ọma na mahadum mgbe ị na -agba bọọlụ dị ka ọrụ mbụ gị siiri m ezigbo ike.
Ọ ruru oge ebe m nwere ule 12 na ọ bụkwa egwuregwu egwuregwu na otu egwuregwu Belgium n'otu oge ahụ. Inwe ule m n'etiti bụ ezigbo mmetụta ọjọọ. N'agbanyeghị ihe mgbochi, enwere m obi ụtọ na m mere ya. Ọ bụ ihe na -atọ m ụtọ nke ukwuu ”.
Romelu Lukaku na-ewepụta oge iji gaa ileta Ụlọ Akwụkwọ Primary School iji kụziere ọgbọ ụmụ ọhụrụ na-ahụ maka egwuregwu football (Boys and Girls) banyere mkpa ọ dị ịhapụ ịhapụ agụmakwụkwọ ha mgbe ha na-achụ ọrụ football. O mere nke a mgbe ọ na-eme ya Gbaa ya Ọrụ amamikpe.
Romelu Lukaku Biography -Olee ka pastọ David si nyere ya aka imeri egwu ya:
Ọ bụ pastọ David Luis onye kpere ekpere maka ya n'oge nsogbu ya na Chelsea FC.
Mgbe ọ dara, Romelu hụrụ David Luiz n'akụkụ ka ọ kasie ya obi ma nye ya ndụmọdụ ka ọ bulie isi ya elu. Omume ahụ na -ekwu oke ihe kpatara o ji kwanyere ya ùgwù ruo ụbọchị.
Taa, a na-ekwu na ekpere ya maka Lukemas kwụsịrị. E wezụga inwe obi abụọ, enwere ike n'ekpere. Ọ bụ ezie na Chineke na-ahọrọ ndị ọ chọrọ ịgọzi. Romelu Lukaku, Chineke nọ n'akụkụ gị.
Dị ka Lukaku si kwuo; “David Luiz dụrụ m ọdụ na mgbe ụfọdụ ọ na -adị m mkpa ka m funahụ m iji merie ọdịnihu! Ọ gwara m mee mkpebi.
Ọ gwara m na enwere m ike ịhapụ Chelsea maka obere klọb. Na ọ bụ m bụ naanị ihe kpatara ịlaghachi azụ n'ọrụ m. Emere m ihe niile o kwuru wee mee ”
Ndụmọdụ a bịara mgbe Romelu Lukaku nwere nkụda mmụọ mgbe ọ tụfuru ntaramahụhụ ikpeazụ nke mgbapụ dị mkpa maka Chelsea.
Na -egwu PlayStation 4 na ụgbọ oloko:
Romelu Lukaku na ndị otu Belgium Kevin Mirallas abụghị naanị ezigbo ndị enyi. Ha bụkwa ndị egwuregwu egwuregwu PlayStation riri ahụ.
Ndị egwuregwu abụọ ahụ nwere mmasị ị were TV na Playstation 4 n'ụgbọ oloko ka ha gwuo egwu mgbe ha na -aga egwuregwu egwuregwu.
Lukaku bụ onye ọkpụkpọ kacha asụ asụsụ kacha elu. Afọ 23 na-asụ Dutch, French, Spanish, Portuguese, Bekee na kwa German ghọtara.
Paul Pogba na -egwu bọọlụ:
Paul Pogba na Romelu Lukaku bụ ezigbo ndị enyi na ndị di na nwunye. Ha na-enwe mmasị igosi na ha bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị na-ezighi ezi dịka ha na-egwuri egwu basketball n'oge ezumike.
Nke a bụ vidiyo Lukaku na -emegide Thierry Henry na Bọọlụ Nkata.
Romelu Lukaku Biography - na -enye ihe mgbaru ọsọ karịa onye ọ bụla nọ n'ụwa:
Lukaku emeriela ihe mgbaru ọsọ 125 n'ọrụ ya n'oge edere. N'otu afọ ahụ 23, C Ronaldo gbatara 110, Luis Suarez 107, Wayne Rooney 100 na Zlatan Ibrahimovic 65.
Eziokwu Romelu Lukaku Wierd:
(1) Lukaku buru nne ya n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ mụsịrị ya.
(2) Mgbe Lukaku na-eme mgbali elu, ọ naghị akwalite onwe ya, ọ na-akwatu ụwa!
(3) Mgbe Romelu Lukaku bịarutere n'oge ọzụzụ, Roberto Martinez tara ndị egwuregwu ndị ọzọ niile ahụhụ maka ịbịa n'isi.
(4) Ndị mmụọ na -anọdụ n'akụkụ ọkụ ọgbụgba wee kọọ akụkọ Romelu Lukaku.
(5) Mgbe Alexander Bell mepụtara ekwentị ahụ, o nwere oku azaghị 3 sitere na Romelu Lukaku.
(6) Ọchịchịrị na -atụ Lukaku egwu.
(7) Paul Scholes nwere ike ịkụ osisi nwere bọọlụ site na yaadị 50, Lukaku nwere ike ịkụ osisi Scholes site na 100 yaadị.
(8) A dọrọ ụmụaka aka na ntị ka ha ghara iji mkpa. A dọrọ aka na ntị ka ha ghara iso Lukaku gbaa ọsọ.
Romelu Lukaku LifeBogger Biography ọkwa:
Lukaku chọrọ ka a mara ya maka ihe mgbaru ọsọ ya, usoro, ọsọ na ụdị ngwa ngwa. Nke a bụ LifeBogger Ọdịdị.